यस्तो छ घिउ किन खाने ? जानी राखौ कारणहरु
अगस्ट 21, 2019 अगस्ट 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments घिउ
घिउ दहीलाई मथेर निकालिएको नौनीलाई पगालेर वा खारेर बनाइन्छ । घिउ सर्वसुलभ चिल्लो पदार्थ हो । अर्गानिक घिउ निकै स्वस्थकर मानिन्छ । प्राचिन कालदेखि प्रयोग हुँदै आएको घिउ चिल्लोको मात्रा एकदमै ९९ दशमलव ९ प्रतिशत हुन्छ । तर, चिल्लोसँगै यो भिटामिनको पावर हाउस नै हो । यसमा दुधमा पाइने प्रोटिन, काब्रोहाइड्रेट र पानीको मात्रा भने हुँदैन । तर, यो स्वास्थ्यको लागि अति उपयोगी हुन्छ ।
१. स्वस्थ मुटुका लागि
घिउबाट प्राकृतिक रुपमा उमेगा ३ र उमेगा ९ ˆयाटी एसिड नामक पोषकतत्व पाइन्छ । यी दुबै तत्वले रक्तनलीमा जमेको कोलेस्ट्रोल हटाउन मद्दत पुग्छ । घिउमा भएका अन्य एन्टीअक्सीड्याण्टले रगतमा कोलेस्ट्रोल छ भने पनि रत्तनलीहरुमा जम्न दिदैन ।
२. मधुमेहका विरामीका लागि
भातसँग घिउ खाँदा मधुमेहको समस्या हुनेहरुको लागि यो फाइदाजनक पनि हुन्छ किनकी घिउले भातमा भएको काब्रोहाइड्रेटलाई सजिलै ग्लुकोजमा परिणत हुन दिदैन । जसले रगतमा अचानक चिनीको मात्रा बढ्नबाट रोक्ने काम गर्छ । यसले शरीरमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण त हुन्छ नै लामो समय शक्ति पनि प्रदान गर्ने काम गर्छ ।
३. मजबुत हाडको लागि
घिउले क्याल्सियमलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न मद्दत गरी हाडलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । भिटामिन के २ ले हाड बलियो र स्वस्थ बनाउनको लागि क्याल्सियमको भन्दा बढी भूमिका खेल्ने पनि बताइन्छ । यो भिटामिनले हाडलाई मात्र नभएर दाँतलाई पनि स्वास्थ राख्ने काम गर्छ ।
४. जोर्नी स्वस्थ बनाउन
हाड जोर्नीको समस्याबाट धेरै मानिस प्रताडित छन् । जसरी चिल्लो गि्रज हालेपछि मेसिनले राम्रोसँग गरी काम गर्छ, घ्यूले पनि हाम्रो शरिरमा त्यस्तै काम गर्छ । घिउले जोर्नीहरुमा आवश्यक पर्ने चिल्लो पदार्थको मात्रा मिलाउन मद्दत गर्छ । यसले जोर्नीमा आवश्यक पर्ने लचकता पनि प्रदान गर्छ ।
५. प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन
घिउमा चिल्लोमा घुल्ने भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । भिटामिन ए को काम भनेको शरीरमा भएको रोगसँग लड्ने क्षमता अर्थात प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो । भिटामिन ए ले एण्टीअक्सीड्याण्टको पनि काम गर्छ । जसले शरीरको कोषहरु मार्ने वाहिरि तत्वहरुलाई पनि निर्मुल पार्ने काम गर्छ । घिउको यस्तै गुणले गर्दा पेट र आन्द्राको क्यान्सरको सम्भावनाबाट टाढा रहन सकिन्छ ।
६. शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्न
खेलाडीहरुले लामो समयसम्म शक्ति प्राप्त गर्नको लागि घिउको प्रयोग गर्छन् । घ्यूमा भएको सर्ट चेन फ्याट्टी एसिड सिधै कलेजोमा गएर शक्तिमा परिणत हुने गर्छ । यसका साथै घ्यूले भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन इ र भिटामिन के लाई पनि शरीरमा राम्रोसँग संचित गर्ने काम गर्छ । जसले गर्दा शरीरलाई शक्ति प्रदान हुन्छ ।
७. आन्द्राको रोगबाट बच्न
स्वस्थकर आन्द्राको लागि सबैभन्दा आवश्यक तत्व भनेको ब्युटाइरिक एसिड हो । यसले आन्द्राको कोषहरुमा पोषण प्रदान गर्छ र अस्वस्थ कोषलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत पुर्याउछ । जुन एसिड घ्यूबाट प्रशस्त मात्रामा पाउन सकिन्छ ।
८. शरीरको इन्फ्लामेसन घटाउन
घिउले सुनिने समस्यालाई पनि धेरै हदसम्म कम गर्छ । जस्तो की ग्यासट्राइटिसले पेटको भित्री भाग सुन्निन्छ । घुँडा, हाड सुनिने समस्या पनि भईरहन्छ । यसलाई कम गर्नको लागि घ्यूमा भएको ब्युटाइरिक एसिडले काम गर्छ ।
९. आँखालाई स्वस्थ राख्न
घिउमा भएको भिटामिन ए ले आँखाको कोषहरुलाई स्वस्थ बनाउन सहयोग पुर्यानउँछ । यसले अन्य विभिन्न आँखा सम्वन्धी समस्यालाई पनि निको पार्ने काम गर्छ ।
१०. छालालाई चिल्लो र स्वस्थ राख्न
११. भुटनमा घिउ खानुस्
घ्यूले भने अन्य तेलको तुलनामा धेरै तापक्रम झेन्न सक्छ र विग्रदैन पनि । नेपालमै पनि करिब ४०-५० वर्ष अगाडी सम्म तरकारी पकाउन घ्यूकै प्रयोग गरिन्थ्यो । यतिसम्मकी मासु पनि घिउमा पकाइन्थ्यो ।
← महिलाले आफू भन्दा बढी उमेरको पुरुष खोज्ने कारणहरु
चायाँबाट बच्ने उपाय र यसको घरेलु उपचार →